कहिले बन्छ भत्केर जोखिम बनेको मेसिनरी वाल ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ अर्थ ∕ कहिले बन्छ भत्केर जोखिम बनेको मेसिनरी वाल ?
कहिले बन्छ भत्केर जोखिम बनेको मेसिनरी वाल ?
Sindhu Khabar शुक्रबार, २०७८ असोज १५ / १२:४४
खाडीचौर । खाडीचौरबाट चिम्लिङ जोड्ने सडकखण्डस्थित क्षतिग्रस्त मेसिनरी वाल अझै मर्मत संम्भार नहुँदा जोखिम बढेको छ । बलेफी गाउपालिका वडा ७ मा रहेको सो वाल मर्मत नगरिँदा सवारीसाधन र पैदल यात्रुलाई जोखिम बढेको हो ।
वाल दिनहँु भास्सिँदै गइरहेको पर्खालले सडक र नाली पुरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पूर्वाधारअन्र्तगतको ४० लाख बराबरको बजेटमा बलेफी गापा वडा ७ को उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको पर्खाल भत्किएको दुई महिना पुगिसकेको छ ।
जिर्ण पर्खाल तत्कालै पुनर्निर्माण र मर्मतसंम्भार नगर्दा वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई आउजाउ गर्नैै मुस्किल अवस्था बनेको स्थानीय सुवास सुन्दासले बताए । यसबारे बलेफी गापा ७ का अगुवासहित स्थानीय जम्मा भएर चर्केको र भत्किएको नाली ,पर्खालको संरचना ठड्याउन स्थानीय तहलाई ध्यानआर्कषण गराउदै आएका छन् ।‘
नाली र मेसिनरी वालको संरचना बर्खायता स्थानपिच्छै कतै भत्किदै कतै चर्किएका छन् । बलेफी गापा ७ का अगुवा अमृत अधिकारीकाअनुसार ‘मेसिनरी वाल’ पर्खाल बलेफी गापा ७ कै वडास्तरिय उपभोक्ता समितिले बनाएको हो ।
यसबारे बलेफी गापा ७ का अध्यक्ष कार्केल लामाले पर्खाल पुनर्निर्माणबारे छलफल भइरहेको र जोखिमबारे थाहा भएको बताए । ‘सबैकुरा थाहा छ, यसबारे आवश्यक छलफल गरिरहेका छौ, सबै पक्षलाई जानकारी गराइसकेका छौ, ’उनले भने । बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले पर्खालले गर्दा भएको समस्याबारे बुझेर तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मतसंम्भार गर्न सम्बन्धित निकायलाई खबर गरिसकेको उल्लेख गरे ।